Uberflip ọdịnaya ahịa Hubs | Martech Zone
Uberflip na-enye ndị na-ere ahịa ohere iweta ọdịnaya ha niile n'otu ebe etiti, na-anabata ma na-etinye aka na njedebe na-enweghị mmemme achọrọ. Ma ọ bụ ọdịnaya vidiyo, PDFs, tweets, mmelite ọnọdụ Facebook ma ọ bụ ndepụta RSS gị - hubs na-enye usoro ikpo okwu maka ndị ọbịa ịchọta ma chọpụta ọdịnaya gị niile n'otu ebe.
Atụmatụ Uberflip Hub
anabata - Designs dabara ọ bụla na ihuenyo. Ọ bụ desktọọpụ, mbadamba na usoro ọdịnaya nke ekwentị n'otu.
mgbanwe - Ọ bụ ezie na Hub gị bụ saịtị naanị ya, ọ na-etinye ọnụ na weebụsaịtị.
Nkwalite - Na-akwalite Hub gị site na mmekọrịta mmadụ na ibe gị, mbinye aka email gị, yana bọtịnụ na weebụsaịtị gị
Tinyekota na ebe nrụọrụ weebụ gị n'enweghị nsogbu - lelee Uberflip si ehiwe maka mkpali.
Dịka - Bulite akara ngosi gị wee họrọ agba na mkpụrụedemede ka ijiri akara gị.
Kpọọ na Omume - Ọdịnaya ọdịnaya gbasara ọgbọ ndu. Ọdịnaya gị na-egosipụta ntụkwasị obi, CTA weghara nkọwa kọntaktị.
nchọpụta - A haziri Hubs maka ndị ọbịa iri ihe karịrị otu ọdịnaya.
Mgbochi - Hubs na-akpaghị aka na-akọ ma na-akọ ezigbo oge na ọtụtụ metrik bara uru dị ka iche iche, nyocha peeji, avg. oge / nleta na ndị ọzọ. Jikọta akaụntụ Google Analytics maka nghọta ọzọ na ndị na-ege gị ntị.
Tags: ọdịnaya ọdịnayaebe a na-ere ahịa ọdịnayauberflipuberflip ehiwe